Ampiarahana amin’ny fanakatonana gazety ny ady amin’ny COVID-19 ao Afovoany-Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Voa mangina amin'ilay viriosy ny gazety an-tsoratra
MpanoratraSaoussen Ben Cheikh
Voadika ny 30 Jona 2020 18:46 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Italiano, Español, Ελληνικά, русский, عربي, Nederlands, Português, বাংলা, English
Lehilahy iray mamaky gazety ao Maraoka, ny 11 Janoary 2010. Sary avy amin'i Martijn.Munneke, CC BY 2.0.
Tsidiho ny fandrakofana manokana an'ny Global Voices mikasika ny vokatry ny COVID-19 manerantany
Ao anatin'ny “ady” atao amin'ny COVID-19, raràn'ny sasantsasany amin'ireo governemanta ao Afovoany-Atsinanana aloha ny asa fanaovana gazety an-tsoratra “mandra-pisian'ny toromarika vaovao“.
Ny sehatra misy an'ireo media sy fampahalalam-baovao, indrindra indrindra, dia efa ratsy endrika ao amin'ny faritra Afovoany-Atsinanana sy Afrika Avaratra (MENA). Tahaka ny any an-toeran-kafa, ireo taona maro nidinan'ny fidirambola, ny famadihana ho nomerika, ny vontoaty tsy dia tsara kalitao ary ny sfidy niraisana nataon'ireo tomponandraikitra, dia nitarika ny fihenan'ny isan'ireo gazety an-tsoratra navoaka sy ny isan'ny mpamaky.
Ny COVID-19 no dona farany namely ny sehatry ny asa fanaovana gazety an-tsoratra. Raha toa natsahatr'ireo governemanta maro ao amin'ny faritra ny gazety an-tsoratra, ireo media an-tsoratra no iray tsy miteny nefa niharan'ny viriosy.
Ny 17 martsa 2020: tao Jordania, tamin'ny filankevitr'ireo minisitra jordaniàna no nampiatoana ny famoahana an'ireo gazety rehetra “satria anisany mandray anjara amin'ny fanapariahana ny valan'aretina izy ireny”.
Ny 22 martsa 2020: tao Oman, ny Komity Faratampony mikasika ny Fikirakirana ny COVD-19 dia nandidy ireo gazety rehetra, gazetiboky sy ireo famoahana hafa mba hampiato ny fanontàana sy fanaparitana izany. Tao Maraoka, ny Minisitry ny Kolontsaina, ny Tanora sy ny Fanatanjahantena dia nampiato ny famoahana sy ny fizaràna rehetra an'ireo andiany an-taratasy satria “marobe ireo olona no mampiasa ny taratasy vita printy amin'ny fiainana andavanandro, mahatonga ny fipariahan'ny viriosy izany, ka ilàna ny fanakanana ny taratasy mba hiarovana ny fahasalaman'ireo olom-pirenena.”
Ny 23 martsa 2020: tao Yemen, ny ministry ny Serasera avy amin'ny governemantan'i Hadi eken'ny iraisam-pirenena, dia namoaka didy hitsy volana mampitsahatra ireo gazety an-tsoratra ho fisorohana ny fipariahan'ny COVID-19.
Ny 24 martsa 2020: Tao Emirà Arabo mitambatra, ny Filankevitra nasionalin'ireo media dia nampiato ny fizaràna ireo gazetiboky sy ireo gazety an-tsoratra rehetra.
Ireo fandraràna mifanesy manerana ny faritra, natao an'ireo gazety an-tsoratra, dia vao mainka manakorontana bebe kokoa ny indostria marefo sy miteraka tsy fahampian'ny fivezivezen'ny torohay.
Ho an'ireo mpanao gazety efa miaritra fepetra fiasàna tsizarizary, hisy fiantraikany lozabe ara-bola, raha tsy efa mankaleo, ireny fihibohana ireny.
Niantso maika ny governemanta mba hanohana ny sehatra ary hamonjy an'ireo mpanao gazety ny Sendikan'ireo mpanao Gazety Jordaniana. “Anjatony ireo mpanao gazety sy mpiasa amin'ny trano printy no tsy mandray vola ary mety ho very asa”, hoy ilay Sendika, izay nanampy fa tokony “hotadiavain'ny governemanta izay fepetra mahomby hahafahan'ireo gazety an-tsoratra mirevina [manao asa fanontàna indray]”.
mpivarotra iray fantatra amin'ny hoe El-Abdi mivarotra boky sy gazety Rabat, Maraoka 17 May 2017. Sary nomen'i Zackariaouad nampiasàna ny lisansa CC BY-SA 4.0.
Ho an'ireo mpamaky, misy fiantraikany ratsy eo amin'ny zon'izy ireo hahazo vaovao ireo fepetra ireo. Ny fandraràna ao Yémen, ohatra, dia misy vokany tena lalina, satria ambany be ny fidirana amin'ny aterineto, 25% monja tamin'ny taona 2019, — sady mivangongo indrindra any amin'ireo tanoran'ireo faritra an-tanàndehibe. Tsy fantatra mazava hoe ahoana sy raha toa ny famakiana vaovao an-tsoratra hikisaka ho aty anaty tambajotra ary iza no hameno ny banga.
Ilaina ny fahafahana miditra amin'ireo vaovao azo antoka, indrindra fa mandritra ny krizy izay mahatonga ny olona hitodika any amin'ireo media mba hahafantatra ny zava-misy sy hahazo vaovao tena izy. Na izany aza, ny ankamaroan'ireo governemanta ao amin'ny faritra – mitozo amin'ireo fanao jadona tranainy - dia nanandrana ihany nifehy sy mametra ny fahafahana maneho hevitra.
ny marina, tsy misy porofo mihitsy na fifandraisana eo amin'ny fanapariahana an'ireo gazety an-tsoratra sy ny fihanaky ny COVID-19. Notsaraina ho azo antoka ny fandraisana an'ireo fonosana entana toy ireo gazety, na dia avy amin'ireo faritra izay voatatitra fa avo be aza ny tranga COVID-19.
Araka ny voalazan'ny World Health Organisation (WHO) – OMS:
Ambany be ny vinavina hoe mety hamindran'ny olona iray mitondra ny tsimok'aretina amin'ireo entana ary amnany ihany koa ny kinanga mety hahazoana ny viriosy izay mitondra ny COVID-19 avy amin'ny fonona entana izay, nifindrafindra, nivezivezy sy nihanjahanja nizaka ireo fepetra maro sy maripàna isankarazany.
Vokatr'izay, ireo fanapahankevitra ny hanidy gazety an-tsoratra dia mety ho natosiky ny politika ihany fa tsy mifototra amin'ireo porofo ara-tsiantifika.
Fomba samihafa no nofidian'ireo firenena hafa tratran'ny valan'aretina COVID-19. Na dia any Italia aza, izay firenena ivon'ny krizy misy an'ireo maty marobe manakaiky ny 20 000 ka nampiharàna an'ireo fepetra tena henjana amin'ny fanokana-monina, dia mitohy mivoaka sy atonta hatrany ireo gazety an-tsoratra.
Any Frantsa, izay petahan'ilay viriosy ihany koa, nokilasiana ho ao anatin'ny sokajin'ireo “fandraharahàna tena ilaina” ireo mpivarotra gazety ary mahazo alalana hisokatra foana. Ireo sehatra samihafa, ireo filankevitra eo an-toerana, ireo orinasa mpaninjara, ireo mpizara, dia mifanome tànana mba hahazoana antoka ny fisian'ireo gazety an-tsoratra.
Ao Royaume-Uni, ny gazety an-tsoratra mpiseho isanandro Metro sy ny Evening Standard, zaraina be amin'ny fomba malalaka ho an'ireo mpandeha any anatin'ireo toerana fiandrasana métro, dia very mpamaky marobe niaraka tamin'ny fihibohana. Mizara any amin'ireo trano fivarotana goavana izy ireo ankehitriny ary manatitra isam-baravarana.
Manaporofo ny ezaka iraisana ireo ohatra vitsivitsy ireo mba hitazonana ireo vahoaka haharaka ny vaovao. Voaaro sy mandray anjara amin'ny fanamafisana ny fanoherana ao anatin'ny krizy ny fivezivezena malalaky ny vaovao/torohay.
Tsy naka an'ity fomba ity ny any Afovoany-Atsinanana.
Rafitra iray miverimberina amin'ny faneriterena sy fifehezana no valintenin'izy ireo amin'ireo fanamby goavana toy ny COVID-19. Voahitsakitsaka tsy misy fanoherana betsaka na tabataba ireo zon'olombelona sy ny fahalalahana maneho hevitra.
Any Iràka, manohy mihantsy ny fihibohana sy ireo fifanandrinana amin'ny mpitandro filaminana ireo mpanao fihetsiketsehana mba hanoherana ny famonoana an'ireo mahery fo mpanohitra ny governemanta, ireo fihetsiketsehana ara-politika, ary ireo fanoherana ao Alzeria sy ao Libanona dia tena lavina noho ny tsy fankatoavana ny elanelana ara-tsosialy sy ny fandraràna ireo fivorivoriana.
Mahery fo Alzeriana iray, izay nangataka ny mba tsy ho tononina anarana, no nanambara tamin'ny Global Voices hoe:
Tsy azon'izy ireo nonofinofisina izany. Tsodrano ho an'ireo tomponandraikitra ity viriosy ity. Manome fialantsiny ho azy ireo izany hanakanana antsika tsy hivorivory sy hanao hetsipanoherana fitakiana fanovàna, izay tsy ho nekentsika velivaly raha tanatina trangan-javatra hafa.
Ankehitriny izay efa hoe maty ny asa fanontàna any amin'ny firenena sasany ao amin'ny faritra. Tsy misy antoka hoe hivoaka indray izy any aoriana. Koa satria tsy misy tetiandro na fanondroana fotoana ary raha toa ireo gazety, indray andro any mety ho hita eny amin'ireo fivarotana indray, ny fomba tsotra hakàna gazety an-tsoratra iray na gazetiboky iray ve mety ho lasa fahatsiarovana efa ela any amin'ireo firenena toa an'i Jordania, Yémen, ary Maraoka?